रिठ्ठे भिरमा ऐना भित्र लुकेको ड*र*लाग्दो रहस्य: रहश्यमय भीरले कसरि निल्यो हजारौ यात्रु ? (हेर्नुस भिडियो) - Kavre Online
सिन्धुली पूर्वी पहाडी र मध्य तराईका जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौं भित्रने बाहिरिने सबै भन्दा छोटो दूरीको बनेपा–सिन्धुली–बर्दीवास (बीपी) राजमार्गमा दैनिक पाँच हजार बढी ठूलासाना सवारी साधन आवतजावत गर्दछन्।नियमित रुपमा आवतजावत गर्ने सावरी साधनमात्र हैन यस राजमार्गमा नेपालको पूर्वी जिल्लाबाट राजधानी र राजधानीबाट पूर्वी जिल्लासम्म घुम्न निस्कनेहरूका सवारीको पनि उत्तिकै चाप हुन्छ।
बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रिठ्ठेभिरमा पुग्ने पुराना तथा नयाँ चालक र यात्रुका लागि भने एउटा आश्चर्य लाग्दो दृष्यले एकछिन रोक्किन बाध्य पुर्याउँछ। सडकको भित्ता खोपेर बनाइएको एउटा सानो सेतिदेविको मन्दिर र त्यसको वरीपरी भित्तै भरी झुण्डाइएका हजार बढी ऐना ।जहाँ एक हजारबढी ऐनैऐनाका बीचमा सेतिदेवी माइको स्थापना गरिएको छ। दैवी शक्तिमाथिको आस्था र सुरक्षित यात्राको मनोभावनासँग जोडिएको यो ठाउँ सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका ५ मुलकोट नजिकै छ।
Prevकेहि महिनाअघि उम्लिरहेको तेलमा डुबेका शिशिर अहिले कस्तो भए ? कस्को आँशु नझर्ला यो भिडियो हेर्दा
Nextसबैको सहयोग गर्ने शिशिर भण्डारीलाई पर्यो सहयोगको खाँचो, शिशिर यसरी सबैसँग सहयोग माग्दै